Appart Prapoutel 7 Laux ski-intaba ibhalkhoni emazantsi
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguFerrand
UFerrand ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Uyakuxabisa igumbi lam elinamagumbi ama-2 angama-34m² kufutshane nethambeka lokutyibilika kunye neevenkile zesitayile se-chalet sasezintabeni esifudumeleyo nesithambileyo. indawo yokuphumla ye-ski e-Prapoutel les 7 Laux-Umbono obalaseleyo kwibalcony enkulu esemazantsi-ntshona-ikhitshi elixhotyisiweyo / igumbi lokuhlala (ibhedi yesofa)-Igumbi lokulala eli-1 elineebhedi ezi-2 ezinqamlezileyo-Igumbi lokuhlambela-indawo yokugcina eninzi
Indawo yam yokuhlala ilungele iintsapho (ezinabantwana).
Ngeeholide zikaFebruwari, urenta kuphela ngeveki.
Amaphepha azikhethele ukuba acelwe kwangaphambili kangangeveki. Ukucoca nguwe.
I-Apartment ihlaziywe ngokupheleleyo kwisitayile se-chalet sentaba. Ubuninzi bokugcinwa kunye nomgangatho omhle wenkonzo kunye nazo zonke izixhobo zasekhitshini, i-dishwasher, i-oven, i-microwave, isethi ye-fondue, i-raclette ... Ilungele ukuhlala ezintabeni kwi-1,400m. Indawo yokuphumla eneendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile, indawo yokuphumla ye-spa kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide, icinema kunye neminye imisebenzi emininzi. Ehlotyeni, ichibi lokuqubha elinesilayidi kunye nemisebenzi emininzi yangaphandle, ukukhwela ibhayisekile entabeni...
4.94 ·Izimvo eziyi-37
4.94 · Izimvo eziyi-37
Usemazantsi emithambeka (izitepsi kuphela zokukhwela) kwindawo yokuhlala ezolileyo kwaye unombono okhethekileyo ojonge emazantsi phezu kwentlambo. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide eneendawo zokutyela kunye neevenkile kukuhamba imizuzu emi-5.
Umbuki zindwendwe ngu- Ferrand
Jonga xa sele ubhukishelwe iimeko eziphambili zokuqokelelwa. Ukunokwenzeka kokuhanjiswa ngumnini kwi-toll ye-Chambéry kwi-A43. Ngaphandle koko buyela kwisiza ngaphambi kwentsimbi yesi-6. Ukufika emva kwentsimbi yesi-6 ukwazisa kungadlulanga intsimbi ye-12 kusuku olungaphambili kunye nentlawulo eyongezelelweyo ye-20 € ekufuneka ihlawulwe kwindawo. Ukufika ngeCawa yentlawulo eyongezelelweyo ye-25 €.
Jonga xa sele ubhukishelwe iimeko eziphambili zokuqokelelwa. Ukunokwenzeka kokuhanjiswa ngumnini kwi-toll ye-Chambéry kwi-A43. Ngaphandle koko buyela kwisiza ngaphambi kwentsimbi y…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$682
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Les Adrets